सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाइ प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने, प्रचण्ड ब्याक हुने संभावना छ? - Likhu Online
सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाइ प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने, प्रचण्ड ब्याक हुने संभावना छ?
३ मंसिर २०७७, बुधबार १२:१५ प्रकाशित
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भई प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने भएका छन् । यसअघि बैठक राख्न नमानेका ओली आफ्नो अर्को प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुन लागेको बुझिएको छ ।
ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सचिवालय बैठक नडाक्ने अडान लिएका थिए । तर, पार्टीभित्र यसले थप संकट आउने भएपछि लचिलो भई बैठकमा सहभागी भई प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने भएका हुन् ।
नेकपा बैठक राख्ने र नराख्ने अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टकरावले पार्टी एकता नै संकटमा परेको छ । नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि नेताहरुलाई अडानबाट पछि हटेर लचिलो बन्न दबाब बढेको छ ।
मङ्सिर १३ गते सम्मको लागि नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित, मन्त्रीपरिषद बैठक सुरु
प्रधानमन्त्री ओलि सहित नेकपा सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा सुरु
प्रम ओली र चिनिया राजदूत बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाइ भेट गरेका छन
ओली अनुपस्थित भए पनि नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित नहुने
विष्णु पौडेल पुगे खुमलटार ओलीको दूत बनेर
सरकारमा जान नपाएकाहरु आत्तिएका छन; शंंकर पोखरेल
ओली र नेपाल बीच नेकपा बिबाद समाधानको लागि छलफल
प्रम को शुभकामना सन्देश; समृद्धि र सुखको लागि एकताबद्ध होऔं
प्रधानमन्त्री ओलि र रास्ट्रपति बिच शितलनिवासमा भेटघाट जारि
नेकपा सचिवालय बैठक मङ्सिर ३ सम्म स्थगन, आजको बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिबेदन पेस गरे